Sakafo kôkômbra maranitra | Recipe ao an-dakozia
Sakafo kôkômbra maranitra
Hana mitchell | | Torohevitra mahasalama, Salady, Starters mangatsiaka, levitra
Manohy manokana izahay Ny vidin'ny volana Janoary, ilay manizingizina ny hihanika antsika hamerina ny endritsika fa tsy hikorisa. Nampanantena anao aho fa hatramin'ny aprily amin'ity 2016 ity izay navoakanay, dia hizara aminareo ireo fomba fahandro sy toro-hevitra mora sy mahafinaritra hanovana Fahazarana manome sakafo tsy maty ho an'ny rikoriko sy mankaleo amin'ny andrana. Androany aho dia mitondra tsakitsaky snacks miaraka amina fikitika hafakely, tena atoro ho an'ireo tia ny Sakafo aziatika. Ity iray ity sakafom-boanjo voatavo mety tsara ho an'ny fanombohana, lovia tokana na sakafo hariva maivana.
Inona avy ireo tombony azo amin'ny fidirana amin'ny klioba kôkômbra?
El kôkômbra dia legioma ambany kaloria miaraka amin'ny rano isan-jato be. ¿Inona no tianao hambara? Eny, izany no sakafo tonga lafatra ampidirina amin'ny sakafon'ireo olona maniry / mila mihena. Ho fanampin'izany, manana votoatin'ny fibre avo be izy io, izay manampy antsika amin'ny fifehezana ny fivezivezena tsinay (veloma ny fitohanana)
Ilay sakaizantsika kôkômbra dia manome vitamina betsaka (vitamina A, B ary C izay manome angovo sy manampy ny hery fiarovan'ny vatana dia iray amin'izany). Zava-dehibe ny mahatadidy fa TSY MITSIPIKA NY CUCUMBER! Ny hodi-kazo dia misy 12% ny vitamina C izay tsy maintsy lanina isan'andro. Ka tsy dia mihinana pilina fanafody raoketra intsony ary kôkômbra betsaka amin'ny fiainanao.
Tsy misy klioba mahasoa kokoa amin'ny fahasalamana noho ny kôkômbra, legioma mpanjaka manana fananana mahasoa. Amin'ity tsakitsaky kôkômbra masiaka ity no itondranay anao fomba fahandro mahasalama sy mahasalama ary tonga lafatra amin'ny sakafo fampihenana lanja.
Fotoana hiketrehana: 5 M
Fotoana manontolo: 10 M
Kiboribory rantsana 1
Manasa tsara ny kôkômbra TSY MISY MIASA AZY IZAO
Tetehintsika daholo ireo akora rehetra ary afangaro ao anaty vilia iray.
Voaro amin'ny sokay voasarimakirana sy menaka sesame 2 sotro fihinanana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: firosoana » General » Torohevitra mahasalama » Sakafo kôkômbra maranitra
Mofomamy siramamy sy kafe